XOG: Qarashka u baxay munaasabaddii 12-ka April xilli dalka ay macluul ka jirto - Caasimada Online
Home Warar XOG: Qarashka u baxay munaasabaddii 12-ka April xilli dalka ay macluul ka...
XOG: Qarashka u baxay munaasabaddii 12-ka April xilli dalka ay macluul ka jirto
Muqdisho (Caasimada Online) – Munaasabadii xuska sanad guuradii 62-aad ee aas-aaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegneyd shalay 12-ka April ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku muujiyay awooda ciidan iyo sheyga kaliya ee uu ku guuleystay inay tahay dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, inkastoo madaxdii ka horeysay ay billaabeen tayeynta iyo dib u dhiska xoogga dalka.
Sida aan xog ku helnay Farmaajo ayaa dabaal dega munaasabadda 12-ka Apriil ku qarash gareeyay lacag dhan saddax milyan dollar xili gobollada dalka qaarkood ay ka jirto macluul baahsan oo dad iyo duunyo saameysay.
Warbixintii ugu danbeysay ee Qaramada Midoobay ayaa sheegeysa in lix milyan muwaadiniin Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini’aadanimo oo ay ku jiraan 330 caruur qarka u saaran macluul.
Farmaajo ayaa khudbadii uu jeediyay ka turjumaysay ololahiisa murashaxnimo, isagoona isu muujiyay inuu yahay waddani inta kale ee ka fikir duwana aheyn muwaadaniin dalka laxjeclo ka heyn.
Wuxuu kaloo uu khudbadiisa ku sheegay in uu ku guuleystay dhismaha ciidan tayo leh oo dalka difaaci kara, inkastoo uu carabkiisa ka ilaaliyay in madaxweyneyaashii hore ay yihiin kuwii soo bilaabay in la dhiso ciidan Soomaaliyeed, waxaana la og yahay in madaxweyne Xasan Sheekh inuu yahay kii dowladda Turkiga heshiiska dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed la saxiixday iyo in xarunta tababarka ciidamada ee TurkSom inuu bixiyay dhulkaasi.
Shantii sano ee u danbeysan ee uu xafiiska fadhiyay Farmaajo waxba kama qaban la dagaalanka argagixisada inay sii kordhiyeen weerarada iyo dilalka mooyee, taas badalkeedna wuxuu ciidamadii qaranka u adeegsaday inuu ku weeraro madaxdii hore ee dalka, siyaasiyiinta ka fikirka duwan iyo inuu ku burburiyo maamul goboleedyada dalka qaarkood.